Site na Nhazi onwe ya na Nkọwapụta Mmetụta Uche Dị Elu | Martech Zone
Ndi mmadu di elu ọgụgụ isi uche (EQ) nwere mmasị dị ukwuu, gosipụta arụmọrụ siri ike ma na-enwekarị ọganiihu. Ha kwusiri ike ma nwee ezigbo mmekọrịta mmadụ na ibe: ha na-egosi mmata nke mmetụta nke ndị ọzọ ma gosipụta mmata a n'okwu na omume ha. Ha nwere ike ịchọta ebe ha na ọtụtụ ndị mmadụ nọ ma lekọta mmekọrịta gafere naanị ọbụbụenyi na ikike inwe mmekọrịta.
Ha na-eme nke a site n'ịhụ na ịtụle nuances dị omimi: mmegharị ahụ, ụda olu, nhọrọ okwu, nhọrọ ihu - usoro ekwuru na nke na-agabiga n'etiti mmadụ - na ịhazigharị omume ha dabara nke ọma. Ndị juri ahụ ka dị na usoro ọnụọgụ nke EQ, mana anyị achọghị nnwale n'ezie: anyị na-amata ndị nwere EQ dị elu dị ka ndị na-ege ntị nke ọma, ndị na-azụlite mmetụta nke anyị ghọtara, na ndị na-emeghachi omume ka anyị na enweghị nsogbu.
Na nyocha ya banyere EQ, ọkà n'akparamàgwà mmadụ, Daniel Kahneman nke Nobel Nrite ama ama na ndị mmadụ na-ahọrọ ịzụ ahịa na onye ha hụrụ n'anya ma tụkwasị obi karịa onye ha na-amaghị, ọbụlagodi na onye ahụ na-enye ngwaahịa ka mma na ọnụ ala.
Cheedị ma ọ bụrụ na ụdị nwere ike ime nke ahụ!
Ndị na-akpata data ahụ
Ebumnuche nke ịzụ ahịa bụ ịmara ma ghọta onye ahịa nke ọma na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ dabara ya wee ree onwe ya. Onye isi njikwa Peter Drucker (laghachi na 1974!)
Isi ụkpụrụ nke ịzụ ahịa bụ na ịmara onye ahịa ka mma ga-enyere gị aka ịnye ngwaahịa na ọrụ ha chọrọ n'ezie. Ghọta ihe gbara ọkpụrụkpụ nke onye ahịa abụrụla akụkụ nke nke ahụ, mana n'oge na-adịbeghị anya ọnụọgụ ozi gbasara ọnọdụ ndị ahịa na-enweta na mbara igwe.
Nhazi onwe bu uzo mbu - anyi mara na nihi ozi-e eji akpaka eji ugbua aha anyi kari ndi nne na nna anyi. Ikike ịkpọ ndị ahịa aha na igosipụta uwe kwesịrị ekwesị ihu igwe, dịka ọmụmaatụ, bụ mmalite dị mma maka ịme njikọ.
Mana ọ bụrụ na ị nwere ike ilele foto nke ndị ahịa gị niile na igwe onyonyo TV, ịhazi onwe gị ga-egosi oke nkọwa dị oke ala, nke dabara na pikselụ itoolu ma ọ bụ iri na abụọ. Would ga-elekwasị anya na pikselụ ahịhịa ndụ dị iche na nke edo edo, mana nke ahụ bụ ihe dị iche iche ị nwere ike ịdabere na njikọ ndị ahịa gị.
Ọ bụrụ na ị ka na-ele ndị ahịa gị anya site na paradaịl ahụ a kpụkọrọ akụ, ị na-efu na ebili mmiri na-esote na mgbanwe ndị ahịa, na-enye ndị ụdị ikike ka ha nwee ọmịiko nye ndị ahịa ha ma gosipụta ọgụgụ isi na mmụọ n'ụzọ ha si ekwurịta okwu.
Igodo nke inweta nkọwa dị elu dị na data. Ihe omuma ndi ahia gi bu teknụzụ kwekọrọ na mmegharị, ụda, ọdịnaya na nkwupụta nke ụmụ mmadụ nwere ọgụgụ isi na-ahụ. Affinities nke ndị ahịa gị, chọrọ, mkpa na ịla azụ na-kanye na data ahụ. Mana iji mepụta nkwukọrịta ọgụgụ isi nke uche gị na ndị ahịa gị, ịchọrọ teknụzụ nke ga-atụgharị data ahụ n'ime usoro omume.
Na-azụlite Akụnụba Gị
Iberibe onu ahịa ahịa teknụzụ nwere ikike ịnapụta ihe na-esiwanye granular na kọwaa foto nke ndị ahịa gị. Dị ka algọridim na data nchịkọta na-aghọ ihe ọkaibe, ndị pikselụ na gị TV na ihuenyo ibu nọgidere nta. Na mberede ị hụrụ na acha anụnụ anụnụ adịghị acha anụnụ anụnụ ma ọlị - ọ bụ pikselụ anọ: akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, isi awọ, aja aja na-acha anụnụ anụnụ.
Ugbu a, ị nwere ike ịdabere na otu ndị ahịa akọwapụtara nke ọma, nke ọ bụla nwere ozi, ọdịnaya ma ọ bụ onyinye nke kwekọrọ na mmasị ha, ebe njem ndị ahịa, akara aka na ọnọdụ uche. Ma dị ka teknụzụ na-aga n'ihu ịnakọta na ịkọwa data, foto ndị ahịa gị na-egosipụta n'ikpeazụ n'ebube ya akọwapụtara nke ọma.
Nke a bụ nkwukọrịta uche nwere ọgụgụ isi nke na-enye azụmaahịa na-aga nke ọma njedebe na asọmpi ahụ site na mmeri obi ndị ahịa ma na-enyere ha aka ịzụlite nnukwu akụ ha nwere - isi ahịa ha.
Tags: ọgụgụ isi uchekeonweezubere iche
Pini Yakuel, onye nchoputa na onye isi nke Kachasị mma. Ọchịchọ ya maka ịghọta ihe na-eme ka omume ndị ahịa duga ya dugara ya na mmepe nke Optimove, onye isi ahịa nke ndị ahịa ahịa Cloud, na-enye ndị ahịa ume ka ha bulie uru ndị ahịa ha. Optimove na-eji 180+ azụmaahịa, gụnyere Zynga, Caesars Interactive, Vitamin Lucky, na Outbrain.